Sidee lagu ogaan karaa inuu nin kaa daalay | Niman qurux badan
Alicia tomero | 12/11/2021 23:14 | Lamaanaha iyo Galmada
Xiriiro badan oo haween ah ayaa laga yaabaa inay la kulmaan hubaal la'aanta haddii ninkaagu daallan yahay xidhiidhkooda lammaane ahaan. Ma jiraan wax ka xanuun badan haddii ay jiraan dareeno weli iyo in kasta oo aadan ku dhicin inaad bixiso tillaabada weydiinta, waxaad door bidaysaa inaad sugto sida wax walba loo xalin doono.
Xiisaha la'aanta mid ka mid ah qaybaha lammaanaha ayaa sababi kara mid weyn keli talisnimo ama dan la'aan. Waxa ugu xun waa marka xiriirku sii jiri karo muddo dheer sababtoo ah lama jebin karo inta badan sababtoo ah isku xirnaanta weyn. Marka ay haweeneydu u dhibtoonayso qof aan loo celin, waa inay nafteeda ku koobtaa abuur oo maamul jacaylkaaga nafta. Sidaa darteed, waa inaad kala tagtaa qofka aan ku jeclayn.
1 Sideen ku ogaan karnaa in ninku uusan hadda daneyneynin xiriirka
1.1 Xiriirka jirka ayaa lumay
1.2 Isagu waa mid aan la aqbali karin oo aan dan ka lahayn dhibaatooyinkaaga
1.3 Ma waxaad samaysaa isagay dhibaysaa?
1.4 Daacad uma aha waxa uu dareemayo
1.5 Mar dambe wax qorshe ah kuma samaynayo
1.6 Markaad la kulanto inaad baxdo wuu caajisaa
Sideen ku ogaan karnaa in ninku uusan hadda daneyneynin xiriirka
Dooddu waxay u kala qaybin kartaa laba nooc oo xaqiiqo ah. Waxaan ogaan karnaa nooca xiriirka labada qof marka aysan wada noolayn, laakiin la ilaaliyo xiriirka shukaansiga. Ama waan kulmi karnaa xiriir deggan oo sugan sanado badan iyo halka ay labada ku wada nool yihiin saqaf isku mid ah. Kahor labada nooc ee xiriirka midkoodna waan heli karnaa ninkaas oo ku daalay wadaagista jacaylkiisa lamaanahaaga. Xaaladdan oo kale, haweenku waxay ku qadarin karaan xiisayn la'aantan iyagoo leh tabo taxane ah si aad u ilaaliso calaamadahaas.
Xiriirka jirka ayaa lumay
Dhab ahaantii ma jiro xiriir ama hore ayaa lumay. Hubaal adigaa leh isku dhawaanshaha sariirta ayaa hoos u dhigtay heerka, labadaba si xamaasad leh tayada iyo tiradaba. Hadda kulanadu waa kuwo goos goos ah oo aan la sii xoojin sidii ay ahayd bilowgii hore. Waxaad hubtaa inuu galmo uun ku raadinayo iyo haddii kalgacalkii uu kuu huray uu hadda aad u qabowsaday.
Isagu waa mid aan la aqbali karin oo aan dan ka lahayn dhibaatooyinkaaga
Hadda isagu kuma xisaabtamo inaad sameyso shaqadiisa guriga, sida uu had iyo jeer sameeyo. Masaafada ayaa bilaabatay inay muuqato oo xataa garabka kuma tiirsana inuu kuu sheego waxa uu sameeyay maalintii. Laakiin kuwan oo keliya maaha tafaasiisha, naagtu waxay raadisaa qalbi qaboojin waxayna u sheegaysaa nooc dhibaato ah oo ay la kulantay iyo lama maqlo. Ninku aad buu u dhex-dhexaadnimo badan yahay oo mar dambe ma siinayo muhiimadda dhibaatooyinka xiriirka, inkasta oo ay iyaga u yihiin.
Ma waxaad samaysaa isagay dhibaysaa?
Sababta kale ee muujin karta rabitaankooda waa marka wax kasta oo aad sheegto ama sameyso ay dhibayaan. Wadahadalku wuu awoodaa dagaal yar ku dhamaado, waxaa jira kala aragti duwanaansho iyo khilaaf mar kasta. Waxay noqon kartaa mid ka mid ah sababaha cad wuxuu raadinayaa marmarsiiyo si ay qiil uga dhigtaan fogaanshahooda.
Daacad uma aha waxa uu dareemayo
Tani waa dhibaato kale oo iman karta. Nin ayaa noqon kara la qabsaday qaab nololeed, raadso raaxadaada oo ha sii jeclaan lamaanahaaga. Daacadnimada oo aad tiraahdo ma dareemaysid wax dhici doona. Been bay kuu sheegi doonaan haddii ujeeddadoodu tahay inay muujiyaan inay luminayaan xiisaha mustaqbalka fog.
Mar dambe wax qorshe ah kuma samaynayo
Had iyo jeer ka carar qorshe kasta in la sameeyo sida lamaane ama ugu yaraan, ku dhawaad ​​qof kasta. Waxa uu ku marmarsiyoon doonaa sida in uu daalan yahay ama uu boos u baahan yahay, laakiin waxa ugu daran waxa uu yimaadaa marka dibadda wax laga soo jeediyo oo aanu diidin. Haddii aysan jirin wada noolaansho, waxaa la ogaan karaa marka Hadda ka dib isagu kuma darin qorshayaashiisa, kaasoo had iyo jeer leh waxyaabo uu sameeyo ama leh jadwal aad u adag.
Markaad la kulanto inaad baxdo wuu caajisaa
Haddii aad dareento in uu shirarkiina beryahan ku caajisay, ma aha calaamad wanaagsan. Durba Xitaa ma lihido sheeko fiican ama xitaa wax kasta oo aad u sheegto waxay u muuqdaan kuwo caajis ah. Intaa waxaa dheer, waxaa lagu tilmaami karaa xiiso la'aantaada Marka uu qof kasta oo aan adiga ahayn eegayo, xitaa dumarka kale ayuu eegayaa.
Marka qofku ku jecel yahay, wuxuu eegayaa oo kaliya kula wadaag daqiiqadihiisa oo dhan, waayo wuu ku xiisay iyo inuu wax badan kaa fikirayo. Marka uu qofkaasi yahay sawirka ugu fiican oo aad bilowdo inaad ogaato sida falcelinta ay adiga kugu sameeyaan aysan u sinneyn, waa inaad ogeysiisaa inay jiraan khilaafaadyo.
Si aad u bilawdo, waa inaad taas samaysaa ka falcelin doona mid ka mid ah faallooyinkaaga, in aad dareento kala fogaansho iyo in haddii aan la hagaajin ay la macno tahay in uu ku luminayo. Haddii uu daacad ka yahay oo uu kuu sheego inuu kaa daalay, halkan wax kale oo uu ka qabto ma jiro. Laakiin laga yaabee inaadan ogaanin fogaantaas oo aadan taas ka warqabin waxay keenaysaa nasasho. Halkaa marka ay marayso dhibaatadan waa la hagaajin karaa
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Sidee lagu ogaan karaa inuu nin kugu daalay iyo in kale